Yakawanda sei kuvhura disensary kana kukura? Chinongedzo che cannabis kutanga mari inobhadhara.
Mari inovhura Bhizinesi reCannabis
Tora Bvunza Zvino
Ndeapi ari mari yekuvhura bhizinesi re cannabis muIllinois?
iyo Illinois cannabis disensary inodhura madhora mazana mashanu kusvika kumadhora zviuru zviviri kuzarura.
Zvakawanda sei kuvhura disensary?
Kuvhura a Cannabis Dispensary muIllinois ichave inodhura nekuda kwemitengo yekuchengetedza, mari inodiwa, marezinesi, kubvunza uye zvemutemo mutengo, izvo zvese zvinopfuurira mukushanda kwekambani yako. Gadzirira uye ita timu yakakura uye bhizinesi kuronga uye uwane vanachipangamazano uye zviwanikwa zvekubudirira kwako. Nyanzvi dzatakataura nekutenda mutengo wekuvhura bhizinesi rako re cannabis muIllinois ichave pakati pemadhora mazana mana kusvika kumamirioni zviuru zvemadhora - uye $ 400,000 miriyoni kusvika kumamiriyoni mazana matatu emamiriyoni emadhora pakukora kukura, zvichienderana nenzvimbo uye saizi yekuvaka kunze. Dunhu rega rega rakatosiyana, asi kana iwe uchida kuvhura iyo disensary kana kukura muIllinois, iyo mirau uye nhamba shoma yemarezinesi inoisa mutengo zvakanyanya kupfuura kuWest Coast.
maitiro ekutanga bhizinesi ye cannabis
Heino pfupiso Pfupi yekutanga Mari inovhura cannabis disensary, kana kupenga kukura muIllinois:
Mari yeMutemo Inoshandiswa
Kunyorera Compilation Mari
Cannabis Mashandiro Anopa Anobhadhara Mari
Accountant & Mamwe maProfessional Adzi
Nharaunda Kuita Mari Kunze
Zvakaringana capitalized Zvinodiwa
Real Estate Kuvaka kunze & yakatarwa mitengo yekurenda
Maruva & Chigadzirwa mutengo
Kuvandudza Mari dzeLayisensi
Mitero (IRC 280E)
Mari Yekuenderera Nenyanzvi
Mari dzeKuvhura Cannabis Bhizinesi Rakatsanangurwa
License yekubhadhara mari yako cannabis disensary kana Craft Kura
Izvi ndizvo chaizvo zvakananga pane ako ese mutero - mari yaunobhadharira kudunhu reIllinois. Ivo vanopihwa nechiremera uye vane nhamba imwechete. Inofa yakapusa kupuranga mune yako bhajeti, asi izvo zvinongova zvigunwe-mu-mvura-dzemabhizinesi ako e cannabis zvinodhura kuvhura iyo dispensary kana hunyanzvi kukura.
Madhora zviuru zvishanu zvisiri kudzoreredzwa mari yekubhadhara.
$ 60,000 mubhadharo wekunyoresa (unowedzeredzwa nemari yakafanana makore ese maviri.)
Kune Craft Grows:
$ 40,000 yekubhadhara mari (inova inovandudzwa)
Nzvimbo yeCannabis yako Dispensary kana Craft Kura
Real estate ndeye zvese nezve nzvimbo, saka paunovhura yako cannabis bhizinesi zvinhu. Rent, se cannabis bhizinesi haigone kubhengi rechimendi chavo real estate, ndiye mutyairi wekutanga weakakura bhajeti chinhu chako cannabis bhizinesi.
Iyo mraba yetsoka yemumakontena ako inokanganisa yako mutero-yakapetwa pasi pe IRC 280E, uyezve nemitero yako yerenda. Nepo varimisi vasingarohwe ne IRC 280E, ivo vanofanirwa kuvaka zvivakwa mukati mezvivakwa zvakavharwa loop system kana vachida kuchengetedza yepamusoro mhando chigadzirwa.
Iwe unofanirwa kushandisa bhajeti uye kufungidzira rako re cannabis bhizinesi chaizvo, nerubatsiro rwevanogadzira matarenda uye vagadziri vezvigadzirwa, kuona kwete chete yako yekutanga inodiwa, asiwo yako yezuva-zuva mishandiro ekushandisa.
Zvakawanda sei kuvhura disensary
Tarisira purogiramu yepamusika pamusika wekutengesa uye zvingangoitika zviyero. Neraki, makanzuru muI Illinois ane mwedzi mitanhatu kubva pamubhadharo wekushandisa kwavo mamiriro ekupa nyika rezenisi kupa nyika kero yayo.
Pamusoro pezvo, nyaya dzekuchengetedza zvine chekuita nenzvimbo yako yezvivakwa dzinofanirwa kuongororwa uye kutaurwa pazviri mukushandisa kwako nekuti kuchengetedzeka kwakakura mapoinzi pasi pekurova kwayo. Ndizvowo zvinoita zvekuvaka nekuchengetedzeka zvinodiwa kuti zvibatanidzwe mune yako yekugovera kana yehunyanzvi kukura bhizinesi, izvo zvisina kuomarara kumadokero emahara nyika. Fenicha, zvigadzirwa uye zvishandiso (FF & E) zvinodhura muIllinois zvinomhanya zvakakwirira nekuda kweiyo chaiyo level yezvekuchengetedza yakavakwa mumutemo kudzivirira kusiyiwa kwe cannabis kubva kune wekutengesa ketani, kana kupamba kupamba mari chete kushandiswa kwevakuru bhizinesi.
Kuenzanisa iyo Yekushandisa kweI Illinois Dispensary kana Craft Kura
Vanopa mazano vanokubatsira iwe kuisa yako pamwechete cannabis rezenisi kunyorera, chirongwa chebhizinesi, zvirongwa zvemari, zvirongwa zvekuchengetedza, zvirongwa zvekuenzanisa munharaunda, uye zvimwe zvinhu zvakawanda. Chishandiso chakazadziswa chichafanana neyaizivikanwa muCentral century se "Nharembozha." Mutsara uyu unoreva kuti kuwanda kwemapepa kubva pakakwirira chikumbiro chekushandisa kuchave kwakanyanya, pamwe kungangoita mazana emapeji.
Icho chikonzero chehurefu hwekushandisa chine chekuita nezvipikirwa izvo bhizinesi rako re cannabis riri kugadzira iyo State of Illinois (uye yako nyika dunhu kana iwe uri kumwe kumwewo) pane iko kuchishandisa. Pamubhadharo rezenisi rekukura kana kuendesa cannabis kune rako bhizinesi, ipapo zvese zvirevo nemamiriro ezvinhu nezvipikirwa zvine chekuita neako bhizinesi re cannabis rawakagadzira mukushandisa zvechokwadi zvazova zvinodikanwa zvekushandisa bhizinesi rako!
Chako chekushandisa chinoda mitemo yekudzidzisa yevashandi, hurongwa hwekufambiswa neveruzhinji, magadzirirwo edziviriro, hushamwari uye zvibvumirano zvezvemari, uye rakakosha marekodhi kuchengetedza maitiro nemabatiro akashandiswa mukukura kana kutengesa kushandiswa kwevakuru cannabis. Hakuna rimwe bhizimusi rine pre-kuronga zvakanyanya iro rinoenda mukupihwa rezinesi rekuvhura masuo.
Kana iwe wakambonzwa chero chero muridzi webhizinesi achinyunyuta pamusoro pemitoro inoremerwa, bvunza kana vari mubhizinesi re cannabis.
Maitiro ekushandisa anogona kuita makumi ezviuru emadhora uye achave akanyatsotsanangurwa pazasi. Chinhu chakakosha chingaitwe nebhizinesi rako kana uchitora njodzi yekunyorera rezenisi rako ndiko kutenga chishandiso chakanaka. Illinois ine mashoma zvigaro yakazaruka yekutanga masaini yeindasitiri. Zvimwe uchaita yekutanga masaisai, kana wechipiri, kana wechitatu.
Kana Illinois ikaita seColorado huwandu wemarezinesi emakanzuru uye hunyanzvi inokura zvichada kuita zvakapetwa katatu pamusoro pazvo zvinoverengeka zvemitemo zvichikwira, zvinoreva kuti vanhu vakaita senge iwe uchafanirwa kuramba uchikurudzira State kuti ivandudze uye kugadzirisa mutemo kune vamwe vatambi .
Cannabis Bhizinesi (Chikwata) Chirongwa
Ndiani anoshanda? Sezvo iwe ungangodaro wakambonzwa ini ndichitaura pamusoro peCannabis Legalization News (Chitatu @ 2 pm CST), iyo indasitiri ye cannabis mutambo wechikwata - kune akawanda makona kubva uko anogona kufambiswa nekambani yako kana kubvisa kukosha kubva pachirimwa. Paunenge uchinyora yako bhizinesi chirongwa, shandisa iyi timu pfungwa kana uchibatanidza: yako tsika, yako yakakosha yepamutemo, mutero, chengetedzo, uye vanoshanda vezano, vako mari, uye zvechokwadi vatengi vako.
Illinois inowedzera kutsva kweiyo yetsika cannabis bhizinesi kuronga kubva kune dzimwe nzvimbo dzekushandisa dzevakuru - nzanga yakaenzana. Iwe unogona kushandisa zvemagariro zvakaenzana zvibodzwa kuvhura iyo cannabis indasitiri kune avo zvakanyanya kukanganisa kukanganisa nemishonga-yemitemo yemakore makumi masere apfuura. Zvichida kambani yako ye cannabis ichaita chirongwa chekushandisa gumi-yakazara-nguva yekudyidzana kwevakawanda kunyorera kuitira kuti bhizinesi rako riwedzere kuzivikanwa sekubatsira kuzadzisa zvinangwa zvehurumende mumutemo wayo wekushandisa wevakuru.
Ehe, chirongwa chebhizinesi chinofanira kunge chine mari yechinyakare uye mari inofungidzirwa, uye ane ruzivo wezvemari kuronga kana CPA neyakatanga kutengeswa, uye netariro cannabis, ruzivo ruchawana kambani yako yakawanda yakavimbika nhamba. Zvirongwa zvebhizinesi reCannabis, zvakasiyana nemapurani- bhizinesi revanilla hurongwa, kazhinji kacho anofanirwa kugadzirisa zvinhu zvebhizinesi rinobva pakuteerana nemutemo. Semuenzaniso, iwe uchave uine mari yekutevera kuti uve nechokwadi chekuti mashandiro ako anoenderana nemitemo mitsva uye yekushandura mumabasa ayo, uye kuti izvo zvinogadziriswa sei nesoftware kana zviwanikwa zvevanhu zvinogona kutsanangurwa.
Wedu magweta e cannabis vanofunga iri mutemo wakanaka wegunwe kutarisa kuti State iri kurova sei zvikumbiro zve cannabis disensary kana kupenga kukura marezinesi uye taura kune yega yega chikamu chavo zvakananga kana uchipindura chinhu chimwe nechimwe chinodiwa nemashandisirwo, uine zvakadzama hurongwa uye tsananguro dzekuti nei bhizinesi rako riri rakakodzera kumiririra basa revane mvumo ye cannabis craft grower kana disensary.
Chengetedzo Chirongwa cheCannabis Dispensary kana Craft Kura
Kuchengetedza hazvireve kungoita burly dude nepfuti. Chengetedzo inosanganisa tekinoroji, dhizaini, uye mutemo wekutarisa maitiro akanakisa kuti vatore hurongwa hwekuti kana paine chakaipa, ndiani akazviita, pazvaitwa, uye zvakanyatsoitika zvese zvinotorwa mukutsanangurwa kwakanyanya, kudhindwa, uye kupihwa mukana kune mutemo masimba ekumanikidza.
Kuchengetedzeka kunovakirwawo muzvivakwa zvako mune zvakavakirwa, kuyerera kwevatengi kuyerera, magonhi, makamera, marambi emagetsi, zvigadzirwa zvekuvaka, uye kunyangwe mirayiridzo yevashandi uye maitiro. Iyo yekuchengetedza kuronga chikamu chekushandisa kwako inoverengerwa kune akawanda ezvikamu. Mabhizinesi eCannabis anodhura kwazvo kuvhura, asi mutengo wekutanga uri kuunganidza chirongwa chakakodzera chekuchengetedza kuitira kuti chinosangana nekutenderwa neNyika yako uye chikoro chepamusoro.
Rekodha Kuchengeta Kuronga Kudzivirira Kutsaura kweCannabis kana Cash
Mazhinji makambani ane proprietary software yakamuka kubva Illinois isati yasvika kunyange yezvokurapa cannabis nyika. Aya ndiwo mabhizinesi ekuwedzera anodyara se cannabis rinova bhizinesi repamutemo. Ndeipi software iwe yauchashandisa kuendesa yako kupi uye kutengesa kwechigadzirwa zvinoenderana nemubvunzi iwe wakasarudza. Iwe haudi kuti yako yePoint of sale (POS) system ive chaiyo, tsime, POS.
Kana chirongwa chako chebhizinesi chichibatanidza kuvandudza tekinoroji dzakadaro mumazano mashanu emakore ekugadzira migero yekuwedzera mari nekutengesa marezenisi ezvavanovaka, unofanira kundifonera kunze kwekunge uri kufunga nezvekugadzira muC #. Ipapo iwe unogona kuhaya mumwe munhu kana kupa chikonzero chakanangana nesarudzo yako yemitauro iyoyo.
Iwe revashandi kudzidziswa zvirongwa uye nemisangano unofanirwawo kuve nemhando dzakanakisa munzvimbo iyo inopa chakachengeteka chakachengetwa rekodha yako cannabis. Maitiro aya anofanirwa kutevedzwa, uye anosanganisira kudzidziswa nechero software yakambofungidzirwa nekambani yako kuenda nayo kunobatsira kutungamira kwayo nekutengesa. Kuziva pamwe nehurongwa hwako kwakakosha kuti udzivise cannabis kubva pamutsara wekugovera, kana kuenda zvakashata nekutora shefu nzvimbo ine chigadzirwa chinofanira kunge chakadzimwa nekukurumidza.
Kukwanisa Kwemari Kugadzira, Kuvaka & Shanda Inogona Kuita Bhizinesi
Iko kushanda kwekutora kwako rezinesi yekukura kana kuendesa cannabis kunosanganisira akawanda ezvigadziriso uye zvirongwa yeyako nzvimbo uye pamwe chigadzirwa chayo kurongedza uye kunyora. Vagadziri vakanyanya kukosha pamufananidzo uye tarisa ivo vanogona kuburitsa kune yako nyowani cannabis brand. Saka kuti vave navo vachirongedza zvigadzirwa zveimba yako chaiyo, kana kugadzirwa kwechigadzirwa hakuzove kwakachipa. Asi kana application yako ikabudirira, saka inozova inonyanya kudhura nekuti zvigadzirwa izvozvi zvinoda kuvakwa uye kushandirwa.
Neine kana kusawana mukana wekukweretesa uye rubatsiro zvinowanikwa kune "vanokwanisa vanokwanisa mukana wehunyanzvi," vese vane marezinesi bhizinesi rinofanirwa kuratidza kugona kwavo kwemari kutevedzera nemabhiriji avo uye vovaita chokwadi. Icho mutengo wakanangana uye wakasarudzika kune yako chaiyo brand, dhizaini yayo, uye nzvimbo yezvivakwa.
Kunyangwe rako bhizinesi re cannabis rakanyanya kudhura, kana kuti rakanyatsotsigirwa mari, unofanirwa kuve nekugona kuratidza kuti une mari yekutakura kuburikidza nekugadzira uye zvakatemwa zvekushandisa kwako, kusanganisira kupa mari yekubhadhara mabasa ako.
Yevashandi Handbook & Dzidzo Mapolisi Anodikanwa neIllinois Cannabis Mutemo
Makambani mazhinji anovaka maitiro avo emabasa nemaoko emaoko pavanokura nekufamba kwenguva, asi bhizinesi re cannabis rinofanirwa kuva navo munzvimbo vasati vavhura masuo avo.
Kudzidziswa kwevashandi ve cannabis imwe nhanho mukuseta yako brand yevatengi ruzivo, asi zvakare inotora mune yako chengetedzo mitezo nekudzidzisa maitiro kuti acherechedze iwo muviri wemunhu mitauro uye zviito kuyeuka zvimwe zvakati nezviitika chero zvingamuka.
Kupfuurirazve dzidzo nekudzidziswa kwevashandi kunogona kugadzirisa maitiro ekudzora uye kuziva kuba, uye kuchengetedza vashandi pamwe nevatengi vakachengeteka muchiitiko chekuba.
Ehe, ma budtenders anofanirwa kuve neruzivo rwe iwo maruva uye nema extracts awo, terpenoid profiles, uye zvimarara kuitira kuti vagone kuraira vatengi maererano nerudzi rwechiitiko chavanotarisira kuwana kubva kune cannabis.
Yako yevashandi kudzidzisa marongero anogona kubatsira iwe kuti uvachengetedze vatengi vako vafare, vanodzora kuHurumende vanofara, uye bhizinesi rako rakachengeteka.
Yenharaunda Engagement / Yenharaunda Kuenzana Urongwa hwekuzadzisa Zvinangwa zveIllinois Cannabis Mutemo
Nyangwe zvisiri zvakawanda mapoinzi akanyorerwa kuti nharaunda isvike, uye mune dzimwe nguva pfungwa dzinenge dzichingove mabhonasi mune zvokubatana - zvinoreva kuti uchiri kufanira kuzviita. Kana iwe ukasunga uye ukasazvisanganisira, asi mumwe munyoreri akadaro, zvakaoma rombo!
Chii chinonzi rako cannabis bhizinesi kuita kudzosa? Pane zvinhu zvakawanda zvaungaite kuti udzidzise vanhu, kana kubatsira avo vakakuvara nekukuvara kunokonzerwa nehondo yezvinodhaka, kana mumwe mukadzi, vashoma, veteran kana akaremara boka.
Ipa rubatsiro rwemari yeichi chirongwa chekubatanidzwa mune yako bhizinesi bhizinesi bhajeti, sezvo ichi chichifanira kuve chiri mari chiri kuenderera kunogadzirwa nekambani yako kuita kuti ipfumise nharaunda yainoshanda.
Mari dzeVashandi veCannabis
Maneja emakanzuru anofanirwa kuchengeta bhizinesi richimhanya zvakanaka uye zvakapindirana. Ivo vanofanirwa kubata nevashandi, vatengi, vatengesi, vemitemo yenyika, varidzi vebhizinesi, pamwe pamwe nevamiriri. Ivo vari kudiwa nekuda kwekushomeka muindasitiri iyi, asi vanachipangamazano vanofungidzira kuti kune yemari yemari, yegore rese yekubhadhara vashandi vanogona kumhanyisa mukiromita yemiriyoni yemadhora. Usatore izwi redu pachiri, heino pikicha kubva kuCOVA pamitengo.
Mari dzeCannabis Professional Advisors
Kune ese ari maviri kutanga uye mutengo uripo. Iwe unoda Gweta, weAccountant, weoperative consultant, uye unofanirwa kuve neinishuwarenzi chaiyo. Mabhajeti egore ezviitiko izvi mumakumi ezviuru emadhora.
Mari yekusimudzira Yako Cannabis Bhizinesi
Kwete chete SEO, social media inosvika kunze, dhizaini uye iweTubes, iwe unogona kuve wakatsigira nharaunda nharaunda kuitika zviitiko kuvaka yako brand. Chatinofarira ndechekutsigira mari yekuwedzera masemina uye fairs yebasa mukudyidzana nemasangano emuno bar, vezvematongerwo enyika, nemakambani e cannabis. Rangarira kushandisa bhajeti rezvinhu izvi muzvirongwa zvako uye kuzvimisira wega kunze kwemakwikwi ako.
Pfupiso yeMitengo Kupinda NeMutemo Cannabis Maketi muIllinois
Saka ikozvino unonzwisisa kuti nei takati zvichave paavhareji anenge mazana mashanu emadhora kuvhura cannabis disensary muIllinois. Isu hatina kunyatsoenda mune zvese zvekushandisa michina yemuchina inokura iyo inogona kukwira nekuda kwemachina uye akasiyana-siyana HVAC, uye chengetedzo, zvinodiwa zvekuvakwa kwehunyanzvi kukura. Ivhareji iyoyo ingangove inenge zviuru zviviri zvemadhora zviuru mazana mashanu asi zvinoenderana nemaitiro ayo kukura kwacho anoda kupa.
Runhare: (309) 740-4033 || Email: tom@collateralbase.com